Allgedo.com » 2012 » June » 17
Home » Archive Daily June 17th, 2012 Nabadoon Sheekh Maxamuud macalin Yuusuf ka mid ma’ahan kooxaha ku dagaalamaya Soomaaliya ee waa Nabadoon Beeleed (Sawiro) Jun 17, 2012 Oslo, Norway (AOL) – Nabadoon Sheekh Maxamuud Macalin Yuusuf waxuu ku noolaa waligiis Gobalka Gedo. Waa nin afgaaban oo lagu tiriyo waliba in uu yahay shaqsi edeb iyo afgaabni isku darsaday. Sheekhu ma ahan mid wax dulmiya ama dhulka fasahaadiya, mana yaqaano waxbadan oo bani’adamka lagu fitneeyay oo ah isku dirka, xanta iyo beenta.
Nabadoonka ayaa ah nin had iyo jeeraale jecel toosnaanta, run... Maamulka Jaaliyadda Gal-jubba waxa uu u mahad-naqayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay hawlaha dhismaha garoonka diyaaradaha ee Degmada C/waaq. Jun 17, 2012 Birmingham, UK (AOL) – Aniga oo ku hadlaya magaca hogganka jaaliyadda dadka kasoo jeeda gobolada Galgaduud, gedo iyo jubbooyinka ee ku nool London Uk, waxan hambalyo iyo bogaadin u diraya dhammaan dadkii ka qayb qaatay walina ku hawllan dhismaha garoonka diyaaradaha C/waaq.
Guud ahaan Waxaa in la xuso mudan dadka gudaha ee dalkii jooga oo runtii isku daray in ay huraan waqtigoodii iyo maalkoodii... Munaasabad ay soo qaban-qaabiyeen gudiga Garoonka Cabudwaaq oo lagu qabtay Gudaha garoonka (Daawo Video iyo sawiro) Jun 17, 2012 Caabudwaaq, Somalia (AOL) – Munaasabadan oo ahayd mid dhaqaale loogu dalbanayay howsha dhismaha garoonka ayaa lagu qabtay gudaha garoonka, waxaana soo qaban qaabiyay gudiga dhaqaalaha garoonka Degmada Caabudwaaq.
Xubnaha gudiga dhaqaalaha oo la hadlay dadwaynihii soo xaadiray munaasabadda ayaa u sheegay in ay arkaan dadku waxqabadkii laga sameeyay gudaha garoonka kadib markii gudiga ay dhaqaalo... DEG DEG AH:- Qarax culus oo goor dhaw oo caawa ah ka dhacay Muqdisho. Jun 17, 2012 Qarax aad u culus ayaa goordhaw oo caawa ah waxa uu ka dhacay xaafadda Xamar bile ee magaalada Muqdisho waxaana uu sababay qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jirta.
Qaraxa ayaa ka dhacay banaanka hore hoyga uu degan yahay Nabadoon Axmed Diiriye Cali, waxaana lala eegtay gaari uu lahaa Nabadoon Maxamed xasan Xaad oo halkaasi ku sugnaa.
Inta la hubo 2 ka mid ah Ilaalada Xaad ayaa halkaa ku geeriyootay... Maamulka Gobolka Banaadir oo maanta kulan laqaatay Agaasime yaasha idaacadaha Muqdisho ka howlgala. Jun 17, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) - War-saxaafaddeedka maamulka gobolka Banaadir, Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta kulan ku aadan ilaallinta shuruucda Saxaafadda gobolka la qaaday masuuliyiinta Idaacaddaha ka howlgal gala gobolka Banaadir, iyadoo gabagabada kulankaasina lagu kala saxiixday heshiis ay kuwada shaqeynayaan warbaahinta iyo maamulka gobolka.
Kulan waxaa shir guddoominayey ku xiggeenka... WAREEGTO:- Madaxweynaha dowladda TFG oo laalay qodobo ka mid ah axdiga KMG ee Kenya lagu dhisay. Jun 17, 2012 Xeer Madaxweynaha LR 202 Taariikh 14/6/2012 laalid qodobbada qaarkood ee Axdiga KMG ah. Madaxweynaha J.S. Markuu arkay: qodobka 39,aad farqada 2aad ee Axdiga KMG. Markuu arkay: qodobka 71aad farqadda 2aad ee Axdiga KMG.
Markuu arkay: xeerka madaxweyne L.R 197 ee 23/5/2012 kuna saabsan go’aanka ay saxiixayaasha ku gaareen Adis Ababa Itoobiya.
Markuu ogaaday: in kala fadhiyada Baarlamanka uu dhab ahaan... PRESS RELEASE: AMISOM Police concludes week‐long workshop on Gender based violence in support of the Somali Police Force (SPF) Jun 17, 2012 The Police Component of the African Union Mission in Somalia (AMISOM) has concluded a Gender Based Violence Workshop in support of the Somali Police Force (SPF) which pooled participants from the Somali Police Force, TFG Ministry of Women Affairs and Family Support, the Somali Civil Society, female ambassadors representative from Addis Ababa, Somali public health officials as well as specialists from... Radio Allgedo/ Waraysiyo